सरकार बालरोग विशेषज्ञ र महिला स्वास्थ्यकर्मीको अनुभवलाई किन सुन्दैन ? – || koselinews.com ||
सरकार बालरोग विशेषज्ञ र महिला स्वास्थ्यकर्मीको अनुभवलाई किन सुन्दैन ?
June 5, 2019 Loksari kunwar health, main_news, News 0
अचम्म लाग्छ, बालबालिकाको कुपोषण हटाउन हाम्रै स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै तिनको उचित प्रयोग गर्न किन सिकाइएको छैन ? सरकार बालरोग विशेषज्ञ र महिला स्वास्थ्यकर्मीको अनुभवलाई किन सुन्दैन ?
मैले विभिन्न जिल्लामा भेटेका बालरोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविकाले बाल भिटा र प्लम्पीनट बाँडेर कुपोषणको समस्या समाधान नहुने बताउँदै आएका छन्, तर पनि बाँड्न छोडिएको छैन ।
म आफैंले पनि केही समयअघि यसै विषयमा एउटा लेख लेखेकी थिएँ । त्यो लेख प्रकाशित भएपछि वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.प्रकाश श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, ‘हामीले नेपालमा प्लम्पीनट र बाल भिटा चाहिंदैन भनेर लेखेका छैनौं, तर तपाईंको लेखसँग सहमत छौं ।’ एक वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञको यो भनाइले मलाई के लाग्यो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम, नीति, नियम बनाउँदा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल नै गर्दैन ।
अचम्म लाग्छ, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालरोग विशेषज्ञ र महिला स्वास्थ्यकर्मीको अनुभवलाई किन सुन्दैन ? बालबालिकाको कुपोषण हटाउन हाम्रै स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै तिनको उचित प्रयोग गर्न किन सिकाइएको छैन ? तर यस्तो प्रश्न गर्नेलाई सरकारी कार्यक्रम विरोधीको ठप्पा लगाइन्छ ।
यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘कुनै एक मन्त्रीको पालामा बाल भिटा र प्लम्पीनट किनेर बाँड्ने निर्णय गरियो । बेच्नेलाई खुशी पारियो, आफू खुशी भइयो तर, यसको उपयोगिताबारे कतै छलफल भएन ।’
बदाम र चिनीबाट बनाइएको प्लम्पीनट फ्रान्सेली चिकित्सक आन्द्रे ब्रियेन (बालपोषण विशेषज्ञ) र इन्जिनियर मिरोल लेसकालले अफ्रिकाका कुपोषित बालबालिकाको उपचारको लागि बनाएका हुन् । उनीहरूले यसबाट नाफा आर्जन गर्ने वा व्यापार गर्ने उद्देश्य राखेका थिएनन् ।
तर, न्यूट्रिसेन नामक फ्रान्सेली कम्पनीले यसको ‘पेटेन्ट’ लिएर व्यापार शुरू गर्यो । बदाम र चिनीबाट सजिलै बनाउन सकिने यस्तो मिश्रणको भूकम्प, युद्ध जस्ता ठूला विपत्तिका बेला पोषिलो खानेकुराको अभाव हुँदा बालबालिकालाई दिन सकिन्छ । हाम्रो जस्तो पोषणयुक्त खाना प्रशस्तै पाइने ठाउँमा यस्ता वस्तु समस्याको दिगो समाधान हुनै सक्दैनन् ।
मैले यस्ता वस्तु नेपाली बालबालिकाका लागि उपयुक्त नभएको बारे विभिन्न समयमा स्वास्थ्य मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव लगायतलाई भन्दै आएकी छु । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भन्नुभएको थियो, “तपाईं ठूला व्यापारीसँग एक्लै लड्नुहुन्छ ?” पछि थाहा पाएँ, ती व्यापारीलाई रोक्ने साहस सरकारसँग पनि रहेनछ ।
हामीले त्यस्तो संस्कृति र हाम्रा आफ्नै उत्पादनको बारेमा छलफल गर्नु जरूरी छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बेकामे पुरिया बाँड्नुको साटो आफ्नै स्रोत–साधनबाट अनुसन्धान गरेर समुदायलाई पोषण सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिनु झन् जरूरी छ ।